राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई सोध्यो– बचतमा ब्याज किन नबढाएको ? | Ekhabaronline.com
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई सोध्यो– बचतमा ब्याज किन नबढाएको ?
ई-खबर अनलाइन | प्रकाशित मितिः बुधबार, माघ १९, २०७३ 7:01:41 PM | 168 पटक पढिएको |
काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैंकले बचतको ब्याज दर बैंकहरूलाई बढाउन सुझाएको छ ।
बैंकले निक्षेप तान्नका लागि मुद्दतिमा मात्र ब्याज बढाएपछि राष्ट्र बैंकले बचतमा पनि ब्याज बढाउन भनेको हो । पछिल्लो समयमा बैंकहरूले निक्षेप बढाउन मुद्दति योजना सार्वजनिक गर्दै ब्याज दर बढाएर १२ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन् । मुद्दतिमा मात्र ब्याज बढाएको प्रति राष्ट्र बैंकले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले बचतमा ब्याज बढाएर मात्र निक्षेप बढ्ने भन्दै यसतर्फ ध्यान दिन बैंकलाई सुझाए । “तपाईंहरुले मुद्दतिमा मात्र ब्याज बढाउँदै हुनुहुन्छ, बचतमा किन नबढाएको हो ?” सिवाकोटीले प्रश्न गरे ।
लगानीयोग्य पुँजी नहुँदा पनि बैंकले बचतमा २ प्रतिशतमात्र ब्याज दिइरहेको भन्दै उनले प्रश्न गरे, “बचतको ब्याज दर २ बाट ५ प्रतिशत पुर्याउन तपाईंहरुलाई के समस्या भयो ? अब बचतको ब्याज बढाउनुस् ।” बैंकको आम्दानी बढेर गए पनि बचतमा ब्याज नबढाउँदा समस्या आएको उनको तर्क थियो । नेपाल बैंकर्स संघले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको छलफलमा बोल्दै डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले बचतमा ४-५ प्रतिशत र ब्याज दिएर ९÷१० प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्ने अवस्था रहने बताए ।
उनले निक्षेप र कर्जा लगानीको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) दर लाई विस्तारै घटाउँदै लैजाने राष्ट्र बैंकको योजना रहेको उनले सुनाए । निक्षेपको तुलनामा कर्जा बढी प्रवाह भएकाले बजारमा लागानीयोग्य पुँजीको अभाव रहेको बताउँदै उनले बचतमा ब्याज बढाउन साथ निक्षेप बढ्ने दाबी गरे । कर्जाको ब्याज दर १०÷११ प्रतिशत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
बचतमा ब्याज दर बढाए अनिवार्य नगद मौज्दातको अनुपात घटाउन सकिने सिवाकोटीले जनाउ दिएका थिए ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले कृषिमा लगानी बढाउन कार्जा सीमा हटाउने भएको छ । कृषिमा लगानी बढाउन कृषि कर्जा सीमा हटाउन लागेको उनले जानकारी दिए । उनले केही दिनभित्र यस विषयमा सर्कुलर जारी गर्ने समेत जानकारी दिए ।